Ergaygii Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsanaa Geeska Afrika oo si lama filaan ah Xilka uga tegaya - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ergaygii Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsanaa Geeska Afrika oo si lama filaan ah Xilka uga tegaya - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Jeffrey Feltman, the United Nations Under-Secretary-General for Political Affairs, speaks at a press conference held in Mogadishu, Somalia, on February 03, 2016. UN Photo / Ilyas Ahmed
Ergeygii gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsanaa Geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa lagu dhawaaqay inuu xilka ka tegayo kadib muddo 9 bilood ah oo uu xilkaasi hayay.
Xilka Ergeygii gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsanaa Geeska Afrika waxaa loo wareegaya David Satterfield oo ah safiirka Maraykanka u fadhiya Turkiga, sida laga soo xigtay xog ay faafisay Wakaaladda wararka Reuters.
Warka shaqo ka tagistiisa oo ahaa lama filaan oo ahaa ayaa soo baxay ka hor inta uusan Khamiista Berri tegin dalka Itoobiya, halkaas oo uu kula kulmayo madaxda sare ee dowladda, waxaana safarkiisu ku saabsan yahay wadahadallo nabadeed oo qeyb ka ah dadaalladii ugu dambeeyay ee Washington ay ku doonayso in lagu soo afjaro colaadda.
Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho shaqo ka tagista Ergeygii u qaabilsanaa Geeska Afrika.
Ergeyga cusub Satterfield ayaa h ruug-caddaa ka tirsan Arrimaha Dibadda Maraykanka oo leh in ka badan 40 sano oo waayo-aragnimo ah, ayaa soo maray jago adag oo ah safiirka Maraykanka ee Turkiga, halkaas oo uu isku hayay xiriirka laba geesoodka ahaa ee u dhexeeya labada dal ee xulafada NATO.
Wuxuu kasoo shaqeeyay dalalka Saudi Arabia, Lebanon, Tunisia iyo Syria, iyo dalal kale, wuxuuna laba jeer ka soo noqday dublamaasigii ugu sareeyay ee Maraykanka ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Bariga Dhexe.
Previous articleMaxaa ka jira in Q/Midoobay dib ula wareegeyso maamulka Hawada Somaaliya..? (Jawaab Culus)
Next articleAfhayeenka Alshabaab oo ka hadlay Khilaafka Farmaajo iyo Rooble: “Waa kuwaas Gaalladii isku dirtay..”